Baadhitaan ku Madax Sidee Si aad u badbaadi Energy? - Shiinaha Like Madax (Tianjin)
luguhu Balanbaalis waalka
Godka waalka iridda dhamaadka
Silent Hubi Madax
Baadhitaan ku Madax Sidee Si aad u badbaadi Energy?
Hubi waalka waa in ay ku tiirsanaadaan xoogga dheecaan laftiisa si toos ah u furan iyo xir waalka, doorka ay tahay in laga hortago warbaahinta dib. Its magaca badan, sida filtarka jeeg, filtarka jeeg, albaabada hal socodka. Sida laga soo xigtay qaabka loo qaybin karaa laba qaybood.
(1) kor: jirka waalka in ay u guuraan ay weheliyaan centerline toosan. waalka noocan oo kale ah waxay leedahay laba: mid waa mid dadban, dhajinta on a tuubooyin siman, waalka iyo waalka xidhay-off qaab la mid ah, oo kale waa toosan, Jaha in biibiile toosan.
(2) Swing, kursiga waalka agagaarka ka baxsan wareeg pin ah, filtarka waxay leeyihiin xuubka hal, waalka double iyo Orange Peel dhibcood, laakiin mabda'a waa isku mid.
foot nuugid bamka waalka biibiile nuugid waxaa doorinaynaa waalka, qaab-dhismeedkooda iyo labadan nooc ee filtarka stop for isku mid, laakiin ay dhamaadka hoose waa u furan si ay u ogolaan biyaha si ay u soo galaan.
waqti Post: Sep-09-2018